MH Uhlolo-nkqubela - Mayelana Nathi - Ningbo MH
Inkampani ye-Ningbo MH yasungulwa kwi-1999, ekhethekileyo kwiimpahla zengubo kunye nezinto zokuthambisa. Emva kweminyaka yokuphuhliswa, uMH usethe ubudlelwane bezoshishino kunye namazwe angama-150, inkampani ye-Mh ithathwa ngokuba yi-"Top 500 China Industry Industry" kunye ne "AAA Trustworthy Company", kunye ne "MH" yezorhwebo ebizwa ngokuba yi-AHA. .
Ngokuphuhliswa kweeminyaka ze-16, ngoku u-MH unabasebenzi be-3,500, ii-5 ezinkulu zokuvelisa iziseko (i-382000m2 epheleleyo), ngokuvelisa amandla ukuya kwi-1500tons / ngenyanga Intambo yokuthunga, I-200tons / inyanga intambo eluhlaza, kunye ne-700,000y / inyanga lace umgubo. UMH naye wabeka ukusebenzisana kwexesha elide kunye nabakhiqizi be-1500 ngaphezu kwe-1000 uhlobo oluhlukileyo izinto zokwakha.
Ngoku i-MH ineofisi ze-40 ze-oversea kwilizwe elihlukileyo, ukunika abathengi iimpendulo ngokukhawuleza inkonzo yangaphakathi, kunye ne-ERP yethu, i-MH APP kunye nezinye iinkqubo ze-IT, i-MH inokunikezela ngeenkonzo zomntu ngamnye. Kungakhathaliseki ukuba unxibelelwano lomthengi kunye ne-MH, nge-imeyile, ngefeksi, umnxeba, i-APP IM okanye ubuso nobuso, umthengi unokuhlala efumana inkonzo esebenzayo, esheshayo kunye nengcali.
I-MH iya kwenza imizamo eqhubekayo yokudala ubukumkani bobugcisa, ukubonelela abathengi ngeqela elipheleleyo, ixabiso elifanelekileyo, ukuhanjiswa kwexesha, ukusetyenziswa kwezinto eziphathekayo ezifanelekileyo.
MH Siboniso ikhaya iindidi - Izikolo --Zizi --Ribbon & Tape - Imiba - Iindawo - Iifayile - Ukwazisa - I -Tassel ne-Fringe / Ukunciphisa - UkuFunda Izinto --Izixhobo kunye nezixhobo - Umshini wokuHlola kunye neengxenye --Fabric - Abanye Ngathi - MH Uqwalaselo - UMH Industrial --- Iifayili Zengxube I-Ribbon & Factory Factories --- iiLaces Factories - MH History - Bonisa iziboniso --Image Galleries - Ividiyo yeVideo Qhagamshelana nathi Indawo yeOffice --Feedback uluntu --Dibana nathi